Uchwepheshe Wokulungisa I-Apk Ukulanda Kwe-Android [Ithuluzi] - I-Luso Gamer
I-Apk Yokulungisa Ingcweti Ukulanda Kwe-Android [Ithuluzi]
January 19, 2022 by John Smith
Imibiko eku-inthanethi isivele isuliwe ukuthi abantu abaningi basebenzisa ama-smartphone amadala noma aphelelwe yisikhathi. Eziba buthakathaka futhi zithole izinsiza ezincane zokwenza imisebenzi. Ngokugxila kulabo basebenzisi beselula, onjiniyela baklame i-Expert Repair Apk.
Umhlaba we-inthanethi unothile ngamathuluzi nezinhlelo zokusebenza ezahlukene. Okungabasebenzisi abadumile nabeselula abanobungane mayelana nokusetshenziswa kokusebenza. Kodwa uma kuziwa ekufinyeleleni izici ze-pro lapho-ke lawo mathuluzi angase aphoqelele umsebenzisi ukuthi athenge okubhaliselwe kwe-premium.
Isiphi isimangalo sokunikeza inguqulo yesilingo samahhala singahlinzeka ngemisebenzi elula eyisisekelo. Okufinyeleleka kakhulu ukusetshenziswa ngaphakathi kwama-smartphones. Ngakho-ke kucatshangelwa usizo lomsebenzisi nokufinyelela okuqondile kuzici ze-premium lolu hlelo lokusebenza olusha Lokulungisa Ingcweti luyethula.
Iyini i-Expert Repair Apk
I-Expert Repair Apk iyithuluzi lokusiza eliku-inthanethi elihlanganisa nokungaxhunyiwe ku-inthanethi elihlelekile eligxile kubasebenzisi be-Android. Isizathu sokuhlela ithuluzi ukuhlinzeka ngomthombo ovikelekile. Lokho kwenza abasebenzisi bajabulele izici ze-premium ezingapheli mahhala.
Uma sibheka emuva emlandweni sathola ukuthi ama-smartphones amadala awanayo inketho yokulungisa. Ngenxa yokungabikho kwale nketho yokulungisa, abasebenzisi bangase bahlangabezane nezinkinga zokubelesela kanye nokulengiswa ngenkathi besebenzisa. Imbangela yale nkinga yokusalela ingenxa yokuhlangana kwezinsiza.
Ezimweni ezinkulu, abasebenzisi beselula abanalo ulwazi mayelana ne-RAM nokusetshenziswa kwayo. Kodwa i-Random Access Memory iyiphuzu eliyinhloko eligcina ngokuyinhloko ulwazi lwesistimu yokusebenza. Kodwa uma ama-RAM esindwa ngamafayela angenamsebenzi.
Bese abasebenzisi bangase baqale ukubhekana nalezi zinkinga zokunikezela ngedatha ehamba kancane. Ngaphandle kwamafayela Odoti, ezinye izimpande eziyinhloko zibangela ukunensa kanye nezinkinga ze-lag. Ngakho-ke kucatshangelwa usizo lomsebenzisi nolwazi oluthuthukisayo lwegeyimu onjiniyela bethula I-Expert Repair Android.
Igama Ukulungisa Uchwepheshe
Inguqulo I-Mod Jupryan LowLight
Usayizi 8.4 MB
Unjiniyela Ukukhanya okuphansi
Igama lephakheji com.lowlight.expertrepairnp
Iyadingeka i-Android 4.0.1 no-Plus
Inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza iyafinyeleleka ukuze ilandwe kusuka lapha. Konke abasebenzisi abadinga ukukwenza nje ukuchofoza inkinobho yesixhumanisi enikeziwe bese ujabulele izici ezingapheli ze-pro. Khumbula ukuthi zonke izinketho ze-pro ziyatholakala ukuze zisetshenziswe ngaphakathi kohlelo lokusebenza zikhululekile ukuzisebenzisa.
Ngenkathi sihlola ithuluzi, sithole izici eziningi ezahlukene ngaphakathi. Lokho kufaka phakathi isilungisisi esizenzakalelayo, isicoci, isilondolozi sebhethri, i-Booster, i-Clean Cache Files kanye nesigaba solwazi lwedivayisi. Ngeke siqinisekise kodwa onjiniyela bahlela ukungeza ezinye izinketho ezintsha ngaphakathi.
Sikholelwa ukuthi lezo ntuthuko ezibalulekile ziyakwazi ukusetshenziswa ezinsukwini ezizayo. Ukwengeza okuhle kakhulu okuzothandwa ngabasebenzisi be-Android isici sokulungisa i-Android Auto. Uma uhlangabezana nenkinga mayelana namaphutha futhi awuzange ube nombono wokuwaxazulula.
Bese sincoma labo basebenzisi ukuthi bafake ithuluzi ngaphakathi kwedivayisi. Bese uchofoza inketho ye-Android Auto Repair bese okunye kuzokwenziwa ngokuzenzakalelayo. Khumbula ukuthi abasebenzisi abalokothi bacele amakhodi noma amakhono ochwepheshe okusebenza.
I-Battery Saver, i-Booster ne-Cache Cleaner nayo izosiza ekuthuthukiseni ukusebenza kwedivayisi. Ukuthuthukisa ukusebenza kwedivayisi ekugcineni kuzothuthukisa ukuzizwisa kwegeyimu ngesibonisi sesithombe se-HD. Ngakho-ke usulungele ukusizakala bese ufaka Ukulanda Uhlelo Lokusebenza Lokulungisa Ingcweti.
Ifayela le-Apk likhululekile ukulanda.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza imisebenzi eminingi ehlukene ye-pro.
Lokho kufaka phakathi i-Android Auto Repair, i-Battery Saver, i-Booster nokuningi.
I-Junk Files Remover ne-Auto Cleaner nazo ziyatholakala ukuze zisetshenziswe.
Ukwengeza okuhle kakhulu ngaphakathi kohlelo lokusebenza i-Android Auto Repair.
Manje ukusebenzisa izinketho abasebenzisi bangasusa kalula amaphutha amaningi.
Abazange badinge ukwenza noma ukuguqula noma isiphi isilungiselelo.
Isikhiphi samafayela angafuneki sizosiza ekuthuthukiseni ukusebenza kwedivayisi.
Akukho ukubhaliswa okudingekayo.
Ayisekeli izikhangiso ezivela eceleni.
I-interface yomsebenzisi igcinwe ilula futhi inobungane.
Ungalanda Kanjani I-Expert Repair Apk
Uma kuziwa ekulandeni inguqulo yakamuva yamafayela e-Apk. Abasebenzisi be-Android bangathembela kuwebhusayithi yethu. Ngoba lapha endaweni yethu yesikhulumi, sinikela ngamafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo kuphela. Ukuqinisekisa ukuvikeleka komsebenzisi kanye nobumfihlo.
Siqashe ithimba lochwepheshe elakhiwe ochwepheshe abahlukahlukene. Ngaphandle uma ithimba liqinisekile ngokusebenza kahle kwe-Apk. Asilokothi sikunikeze ngaphakathi kwesigaba sokulanda kubasebenzisi. Ukulanda inguqulo yakamuva ye-Apk sicela uchofoze isixhumanisi esinikeziwe esingezansi.
Ifayela lohlelo lokusebenza esilisekelayo lapha ngaphakathi kwesigaba sokulanda ngelangempela. Ngisho nathi sifaka i-Apk kumaselula ahlukene futhi asikwazi ukuthola inkinga enkulu. Uhlelo lokusebenza lungokoqobo futhi luphephile ukulifaka.
Amanye amathuluzi okusiza e-Android afanayo ayabiwa futhi ashicilelwe. Ezithelayo futhi ezikhiqizayo mayelana nokusetshenziswa. Ukufaka lezo ezinye izinhlelo zokusebenza sicela ulandele ama-URL. Labo banjalo I-BGMI GFX Tool Pro Apk futhi I-Jack Game Booster Apk.
Ngakho-ke uthanda ukudlala imidlalo yakamuva futhi awukwazi ukusebenza kahle ngenxa yokunensa kanye nezinye izinkinga ezihlobene nedivayisi. Khona-ke ungakhathazeki ngoba lapha silethe i-Expert Repair Apk. Okuzosusa ngokuzenzakalela wonke amaphutha futhi kukhuphule ukusebenza kwedivayisi.
Izigaba Amathuluzi, Apps Amathegi Uchwepheshe Wokulungisa i-Android, Ukulungisa Ingcweti Apk, Uhlelo Lokulungisa Uchwepheshe, Ukulanda Uhlelo Lokusebenza Lokulungisa Ingcweti Imeyili kwemikhumbi
I-Retex Medya Apk Download Ye-Android [Yakamuva 2022]
I-KUNJUY Apk Download 2022 Ye-Android [Iziteshi ze-IPTV]